प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए कांग्रेस संसदीय दलको बैठक
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ । आइतबार दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवनमा बैठक बोलाइएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्
देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने जनमोर्चाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले नवगठित देउवा नेतृत्वको
प्रधानमन्त्री देउवालाई चिनियाँ राजदूत यान्छीले भेटेर दिइन् बधाई
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भेटेर बधाई दिएकी छन् । बिहीबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर राजदूत यान्छीले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएकी हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री
पूर्वमन्त्री आले मन्त्री माग्दै देउवा भेट्न गएकै हुन् ? आलेले दिए स्पष्टीकरण
डोटी । निवर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर मन्त्री बनाउन आग्रह नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै उनले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा शुक्रबार सरकारी निवास बालुवाटार सर्ने भएका छन् । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिएपनि उनी भोलि मात्रै सरकारी निवासमा सर्ने उनलको सचिवालयले जनाएको
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार बैठक दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । आजको बैठकले पुनःस्थापित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्न कोटेश्वर पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा केहीबेरअघि नेता नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर गएका हुन् । कांग्रेस
देउवाले बोलाए कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताको बैठक बोलाएका छन् । देउवाले बिहीबार दिउँसो २ बजे बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बस्नेगरी बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा
शेरबहादुर देउवा : पाँचौपटक प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । डडेलधुराको साविक अशोकग्राम गाविस-५ मा वि.सं. २००४ साल जेठ ३० गते जन्मिएका शेर बहादुर देउवा पाँचौँपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका
प्रधानमन्त्री देउवाको शपथग्रहण साँझ ६ बजे
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको शपथग्रहण आज साँझ ६ बजेका लागि तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उनको शपथ ग्रहण हुने छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश